Wararka - Qiimaha Birta Yurub ayaa soo kabanaya iyadoo Hanjabaadaha Soo Dhoofka ay Gaabinayaan
Qiimaha birta yurubiyanku wuu soo kabanayaa isagoo yareynaya Hanjabaada Soo Dejinta
Iibsadayaasha yurub ee waxsoosaarka qaawinta qunyar socodka waxay si tartiib tartiib ah u bilaabeen inay qayb ahaan aqbalaan sicir bararka qiimaha ee la soo jeediyay, badhtamihii / dabayaaqadii Diisambar 2019. Gabagabada waji qadhaadh oo muddo dheer socday ayaa horseeday horumar ku yimid dalab muuqda. Intaa waxaa sii dheer, soosaarka wax soo saarka, oo ay fuliyeen soo saarayaasha birta gudaha, qeybta dambe ee 2019, waxay bilaabeen inay adkeeyaan helitaanka iyo kordhinta waqtiyada hogaaminta dhalmada. Alaab-qeybiyeyaasha dalka saddexaad waxay bilaabeen inay sare u qaadaan qiimahooda, kororka ku yimid qiimaha alaabta ceyriinka ah. Waqtigaan la joogo, oraahyada soo dejinta ayaa qiimahoodu gaarayaa € 30 halkii tan tan dalabyada gudaha ah, taasoo ka dhigeysa kuwa wax iibsada ee reer Yurub inay helaan ilo ka yar oo ay wax ku kala iibsadaan.
Suuqa birta, horaantii bishii Janaayo 2020, wuu gaabis ahaa, maaddaama shirkaduhu ka soo laabteen dabaaldegyadii dheeraa ee Kirismaska ​​/ Sannadka Cusub. Dib u soo noqosho kasta oo dhaqdhaqaaqa dhaqaale ayaa la saadaalinayaa inuu noqdo mid dhexdhexaad ah, muddada dhexe. Iibsadayaashu way feejignaadaan, iyagoo ka baqaya in, haddii baahida dhabta ah ay si weyn u fiicnaato, kororka qiimaha aan la sii wadi karin. Si kastaba ha noqotee, soo saarayaasha ayaa sii wadaya inay ka hadlaan qiimaha kor.
Suuqa Jarmalka ayaa aamusnaa, horaantii Janaayo. Mills waxay cadeynayaan inay hayaan buugaag dalab wanaagsan leh. Hoos u dhigista awooda ee la sameeyay qeybtii dambe ee 2019, waxay saameyn togan ku yeelatay qiimaha badeecada wax lagu shiido. Wax dhaqdhaqaaq muhiim ah oo soo dejin ah lama sheegin. Shirkado sameeya birta ayaa riixaya kordhin dheeraad ah dhamaadka rubuc-dhamaadka / horaanta rubuca labaad.
Qiimaha badeecada wax lagu kala iibsado ee Faransiiska ayaa bilaabay inuu kor u kaco badhtamihii / dabayaaqadii Diseembar 2019. Firfircoonida ayaa la qabtay ka hor fasaxa kirismaska. Buugaagta dalabka Mills ayaa la hagaajiyay. Natiija ahaan, waqtiyada hogaaminta bixinta ayaa la kordhiyay. Soo-saareyaasha Midowga Yurub waxay hadda raadinayaan inay hirgeliyaan kor u kaca qiimaha dheeri ah oo ah € 20/40 halkii tan. Iibinta millatariga bishii Janaayo si tartiib tartiib ah ayey u bilaabmeen. Suuqa durdurku wuu sii fir fircoon yahay oo qaybiyayaashu waxay filayaan in ganacsigu sii ahaado mid lagu qanco. Si kastaba ha noqotee, dalabka ka imanaya qaybo badan ayaa laga yaabaa inuu hoos u dhaco, marka loo eego sanadkii hore. Oraahyada soo dejinta, oo si aad ah kor ugu kacay, ma aha kuwo hadda tartamaya.
Tirooyinka wax soo saarka millatariga talyaaniga ayaa gaaray halka ugu hooseysa, wareeggan, dhammaadka Nofeembar 2019. Waxay inyar kor u dhaqaaqeen bilowgii Diseembar. Intii lagu gudajiray labadii usbuuc ee ugu dambeysay sanadka, soo nooleynta qeyb ahaan dalabka ayaa la xusay, howlo dib u habeyn awgeed. Qiimaha ayaa sii waday inuu fuulo. Iibsadayaashu waxay ogaadeen in dadka sameeya birta ay ka go'an tahay inay kor u qaadaan qiimaha aasaasiga ah si ay wax uga beddelaan qarashka alaabta ceyriinka ah ee koraya. Mashiinnada ayaa sidoo kale ka faa'iideystay khalkhalka soo dejinta ee waddan saddexaad, maxaa yeelay inta badan shirkadaha wax soo saara ee adduunka ayaa kor u qaaday oraahdooda. Waqtiga dirida alaabada ayaa sii kordheysa sababtoo ah wax soo saar hore oo soo go'ay, oo lagu daray mashiinada la joojiyo / goynta inta lagu jiro xilliga fasaxa Kirismaska. Alaab-qeybiyeyaasha ayaa soo jeedinaya in kor loo qaado qiimaha dheeraadka ah. Xarumaha adeegyadu waxay sii wadaan halganka si ay u sameeyaan xadad faa'iido oo la aqbali karo. Aragtida dhaqaale waa mid liidata.
Waxsoosaarka wax soo saarka UK ayaa sii xumaanayay, bishii Diseembar. Si kastaba ha noqotee, tiro ka mid ah qeybiyeyaasha biraha ayaa mashquul ku ahaa xilligii loo diyaar garoobayay Kirismaska. Dalbashada qaadashada, tan iyo fasaxa, waa macquul. Dareenka xun ayaa meesha ka baxay tan iyo doorashadii guud. Alaab-qeybiyeyaasha wax soo saarka mashiinka duubku waxay kordhinayaan qiimaha. Dhowr heshiis ayaa la soo gabagabeeyay, dabayaaqadii bishii Diseembar, iyada oo salka ku haysay qiyaastii £ 30 halkii tan tan ka sarreysa intii lagu jiray degsiimooyinkii hore. Kordhin dheeri ah ayaa la soo jeedinayaa laakiin iibsadayaashu waxay su'aal ka qabaan in kuwani ay sii jiri karaan, haddii aan dalabku si weyn u wanaajin Macaamiisha ayaa ka caga jiidaya inay dhigaan amarro waaweyn oo xagga hore ah.
Dhowr horumar oo qiimo leh ayaa ka dhacay suuqa Beljam, bartamihii / dabayaaqadii Diseembar. Mills, caalami ahaan, waxay ka faa'iideysteen kororka kharashka soo gelinta si ay u horumariyaan qiimahooda birta. Gudaha Biljimka, iibsadayaasha biraha, ugu dambeynti waxay qireen baahida loo qabo in la bixiyo wax badan, in kastoo, in ka yar ka yar kuwa birta sameeya ee la soo jeediyay. Tani waxay awoodsiisay dhaqdhaqaaqa wax iibsiga inuu sii socdo. Si kastaba ha noqotee, iibsadayaashu waxay su'aal ka qabaan sheegashada in baahida dhabta ah ay si weyn isu beddeshay. Kordhinta qiimaha dheeraadka ah lama hubo xaaladaha suuqa ee hadda jira.
Baahida Isbaanishka ee badeecadaha wax lagu shiido ayaa hadda deggan. Qiimihii aasaasiga ahaa ayaa dib loo helay, bishii Janaayo. Xawliga kor u kaca wuxuu bilaabmay badhtamihii Diisambar waana la ilaaliyay, markii laga soo noqday fasaxyadii maxalliga ahaa. Kufsiga ayaa socday, horraantii Diseembar. Hadda, shirkaduhu waxay u baahan yihiin inay dib u dalbadaan. Soo-saareyaashu waxay dalbanayaan in la kordhiyo sicirka badeecadaha la keenayo bisha Maarso iyo xitaa in la kordhiyo qiimaha bisha Abriil. Si kastaba ha noqotee, qalab raqiis ah, oo laga helay ilaha saddexaad ee waddanka, oo la xareeyay Oktoobar / Nofeembar, ayaa bilaabanaya inay yimaadaan. Tani waxay u dhaqmi kartaa sidii bakhaar looga soo horjeedo kor u kaca qiimaha gudaha.
Qalabka Shaqada kulul ee Birta Lagu Dhejiyo, Tct Wareegga Mashiinka Loogu Talagalay Birta, Hss M2 Wareegyada Sawirada Wareegtada ah, Tct Wareegga Wareegga Sawirka, Mashiinka Mashiinka Wareegga Wareega ah, Hss M35 Wareegyada Sawirada Wareegtada ah,